Home | COVID-19 Myanmar
COVID-19 MyanmarInformation & Updates
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း (၂
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း (၂၀
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် COVID-19 နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ များနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသား အဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် COVID -19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် COVID -19 နှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဆောင်ရွက်နေသူများန
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဆောင်ရွက်နေသူမျာ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်အမှတ်၊ ၁ / ၂၀၂၀
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄ / ၂၀၂၀ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပိုင် မော်တော်ယာဉ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၃ / ၂၀၂၀ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန်နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကင်းဝေးစေရန် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်နာယူခြင်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၌ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၅/ ၂၀၂၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၆/ ၂၀၂၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ကြေညာချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၂၀ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၅ ရက် ( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက် ) ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာချက် (၂၉-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း (MNA) ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေး (၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ မနီလာမြို့)
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေး (၂၃-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ ဆိုးလ်မြို့)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့်မြန်မာသင်္ဘောသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား တတိယသုတ်အဖြစ် ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ဒုတိယသုတ်အဖြစ် ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့
ပြည်ပနိုင်ငံများ၌ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့ (၂၂-၅-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အီတလီနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာသင်္ဘောသားများကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း (၂၂-၅-၂၀၂၀ ရက်၊ ရောမမြို့)
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံအချို့တို့တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအား စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေး
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၄-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၄-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၅:၃၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၅:၀၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် မြို့နယ်/ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အိမ်ဆိုင်များနှင့်လမ်းဘေးစျေးဆိုင်များ တိကျစွာလိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 1.0) နေ့စွဲ -၂၁-၁၁-၂၀၂၀
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၀၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၁-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၁-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၀၀)နာရီ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
ကျပ် ၁၀၄၇ ဒသမ ၆၃၉ ဘီလီယံကို အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေသို့ လွှဲပြောင်းထည့်သွင်းပြီး သုံးစွဲသွားမည်
နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပျံသန်းဆင်းသက်ခြင်း ယာယီကန့်သတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် သက်ရောက်မှုကာလကို အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်သတ်မှတ်
ဖော်ပြပါ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် နေထိုင်သည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် နေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ကြောင်း ကြေညာချက်
၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ လိုက်ပါခဲ့သူများ နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ မိမိအသိစိတ်ဖြင့် ချက်ချင်းသတင်းပို့ရန် တိုက်တွန်းနှိူးဆော်
COVID-19 ကာလတွင် စိတ်ဖိစီးမှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရေး အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း
နေပြည်တော်မှ ပြည်သူများသို့ တိုက်တွန်းအကြံပြုချက်များ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများသို့ တိုက်တွန်းအကြံပြုချက်များ
နေပြည်တော်သို့ လာရောက်သည့် အများပြည်သူများအား COVID-19 ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခ ကောက်ခံသည့်နှုန်းထား သတ်မှတ်ခြင်း
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ဧရာ၀တီဖောင်ဒေးရှင်း စစ်တွေပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ကာကွယ်ကုသရေးပစ္စည်းများနှင့် အလှူငွေများ လှူဒါန်း
ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ IDP စခန်းများတွင် COVID - 19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ကိုဗစ်-၁၉ကာလအတွင်း ထိခိုက်လွယ်အခြေအနေတွင်ရှိသော အမျိုးသမီးများအား တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် (၅၀၀၀၀) စီထောက်ပံ့ ပေးသွားမည်
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် UNICEF က ထောက်ပံ့ကူညီသည့် ဆေးပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသော အထူးကုန်တင်လေယာဉ် ရောက်ရှိ
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်သော ပြည်သူများသို့ ပန်ကြားချက်ကို ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနှင့် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်များသို့ လာရောက်မည့်သူများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း
Covid ကာလ ပြည်သူများ Home Stay အချိန်မှာ စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၊လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲတဲ့ပြည်သူတွေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ သုံးစွဲနိုင်စေဖို့သတင်းမျှဝေခြင
ပြည်သူသို့ အသိပေး တင်ပြချက်
Coranavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard
Copyright © 2020. Information Committee. All rights reserved.